Flight lekọtara Airbus A350-900 XWB
ajụjụ Flight lekọtara Airbus A350-900 XWB
2 afọ 2 ọnwa gara aga #303 by Colonelwing
N'ihi na ndị na-achọ ihe ọ na-iyi a n'ezie mara mma ma na-eme A350 na payware mode.
M Na-amaghị ihe ọ bụla banyere na ngwaahịa ,, ma si ihe m mere na-agụ na na review ,, ya anya ukwuu.
Gị oke ,, dị ka m na ọ dịghị nso mmekọrita na na ngwaahịa banyere n'elu.
Eleghị anya, onye nwere ike jupụta na-ekwu okwu banyere ya ọzọ ,, eche free ime otú Gentelmen ...
2 afọ 2 ọnwa gara aga #304 by Dariussssss
Ụgbọ elu dị ka nke a ga-eme ka na-aga n'ihi na ndị ọzọ Sims, dị ka P3D na X-ụgbọelu ....
2 afọ 2 ọnwa gara aga #315 by JanneAir15
Ọ na-adịghị anya mara mma na m na-eche na m nke na m na-na n'ihi na m na-achọ, ọ bụkwa maka a ọma A350 na m na-eche na nke a bụ otu ma na m na na-achọ ezi A380. Mmadụ nwere ike biko na-atụ aro m ma ọ bụrụ na ị maara a ọma Airbus A380 ikike tinye liveries kwa. M na-kere a isiokwu na-akpọ "ụgbọelu na-atụ aro" ma ọ bụrụ na i nwere a aro nke A380 biko, gwa m.
2 afọ 2 ọnwa gara aga - 2 afọ 2 ọnwa gara aga #321 by Colonelwing
Nice oke na Airbus A350-900 XWB Janne ,, cheta na ọ bụ maka XPlane na erubeghị maka FSX
Dị nnọọ jide n'aka na befort zuo i nwere XPlane Sim ...
Ọ dịghị onye na-erughị m chere na ọ bụ dị ịrịba ama na ọbụna na-enweghị otu officical arụmọrụ akwụkwọ tọhapụrụ ma Flight lekọtara jisiri dọpụta ya nke na mepụtara a n'ụzọ zuru okè kweta A350 maka X-ụgbọelu. Ana m atụ anya na-esonụ mmelite a aicraft. M na-eche na ihe afọ ndị FSX / P3D ọrụ ga-enwe ike ife efe ihe Airbus A350.
Nchịkọta ikpeazụ: 2 afọ 2 ọnwa gara aga Colonelwing.
2 afọ 2 ọnwa gara aga #323 by JanneAir15
Nnọọ! Daalụ maka ozi n'ihi na m nwere FSX ma e nwere A350 site Aerosoft nke bụ maka FSX.
Site n'ụzọ aha m bụ Janne (bụghị Jeanne) na m na na na a inyom!
2 afọ 2 ọnwa gara aga #324 by Colonelwing
Mere wutere ,, ọmụma e gbazie ...